Ukuze ujabulele ngokugcwele iholide lwakho Greece libalele, uqaphele indawo Orion Hotel Rhodes 3 *. Lapha Uyobe uzungezwe abanakekela kuzokuvumela bayakhohlwa zonke izinkinga kanye nezindaba.
Orion Hotel Rhodes - Incazelo
Greece - lokhu ingenye ethandwa kakhulu iholidi izindawo, okuyinto sowunezigidi uyajabula lezihambi ezivela emhlabeni wonke. Uma sikhuluma ngayo leli hhotela esikalini, njengoba i-Orion Hotel Rhodes 3 *, kuyafaneleka ukuthi elimiswe 1991. umsebenzi wokwakha kabusha Kugcine kanye nokulungisa Kwakuseshwa 2003.
Izivakashi zehhotela Orion Hotel Rhodes 3 * konke okudingayo zokuphila ukhululekile nokuzijabulisa. Lapha kukhona ichibi lokubhukuda, futhi izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, futhi wireless Ukufinyelela i-Inthanethi, nokuningi. Kubalulekile ukuphawula ukuthi ihhotela inikeza izivakashi 109 amakamelo ukhululekile elise izakhiwo ezintathu yesimanje.
ukuhamba imizuzu nje 4 'kusukela beach itholakala Orion Hotel Rhodes 3 *. Greece, Faliraki, Kallithea Avenue, 851 - ikheli resort. Le iholidi emzaneni ethakazelisayo, okuyinto Sekuyisikhathi eside abathandwa izivakashi ngenxa lenqwaba izitolo, izindawo zokudla nokuzijabulisa izindawo. Izindawo eliseduze ukuthi kufanele nakanjani vakashela, imi kanje:
Rhodes amanzi ngobukhulu kwepaki (2.5 km);
okunethezeka Baile Kallithea olwandle (5 km);
lasendulo Acropolis Yalissos (8 km);
Rhodes Palace (14 km);
City Faliraki lolwandle (1 km);
Entoni Kuinna bay (4 km).
Orion Hotel Rhodes 3 * linikeza izivakashi zayo indawo yokuhlala ntofontofo. Izimenywa zingabelana bazikhethele omunye ongakhetha ezimbili yokuhlala, okuyilezi:
Standard Aphathimenti Double unika izivakashi ithuba uhlale imibhede emibili olulodwa omatilasi wamathambo. Ukuze uthole umuntu esengeziwe noma umntwana uhlaka iyatholakala. Ungase futhi ujabulele ukubukwa elihle sibonga eziwazungezile ukuze emphemeni yangasese.
amafulethi Uphakeme kukhona indawo ivulekile nokuningi imishini yesimanje. Kukhona inikezwa endaweni encane zihlalo, inqobo nempahla esithambile futhi itafula itiye. Njengomhlaba isigaba odlule, amakamelo aphakeme kuvulandi. Kukhona kungenzeka uhlaka owengeziwe.
Kuyinto engenakwenzeka hhayi ukusho amazwi ambalwa mayelana nomklamo isinqumo Igumbi resort ehhotela Orion Hotel Rhodes. Photo ikhombisa isivakashi Suites ingaphakathi sleek futhi ethokomele. It ubuswa ezinemibala egqamile, okuyinto ikuvumela ukuba zibukeke bandise isikhala.
Kuwufanele uqaphele ukunakekelwa okukhethekile ngawo ephatha izivakashi yayo "Orion" (Ihhotela, Rhodes). Igumbi ngalinye isivakashi iza uhlu elandelayo Izinsiza:
TV flat screen uxhumeke satellite dish, ukusakaza iziteshi eziningi, phakathi lapho kukhona abaningi abakhulumayo Russian-;
sibonga imbala, ungahlala ukugcina egumbini zokudla supply encane ukuba isidlo nganoma isiphi isikhathi esilungele wena;
wokuxoxisana nge ukwamukela yokudlela wanikeza socingweni ukuba sikukhokhise inhlawulo exhunywe kwi-umugqa ngamazwe;
Ngesikhathi sasehlobo, igumbi Ubuye air conditioning (kuyafaneleka ukuthi uhlelo eyodwa, okusho ukuthi idivayisi sivuliwe nesimiso);
Igumbi ngalinye has a Ikhishi, ngakho uyokwazi ukupheka bona nabathandekayo babo, kodwa ngeke kwaguqulwa ukulungiswa ukudla okushisayo;
ekuhlanganisweni yokugezela has a eshaweni;
uma ufuna ukulala isikhathi eside ekuseni, sehla amafasitela anezinhlaka izilenge uqweqwe ilanga ngeke ukuphazamisa ubuthongo;
Indlu yangasese uye esakhelwe kagesi umshini wokomisa izinwele;
sibonga emphemeni ungajabulela landscape enhle ezungeze, abahlezi Ababazi bakha esihlalweni ukhululekile.
Hlanza - omunye "Orion" ehhotela izinzuzo eziningi. Ihhotela (Rhodes) has kulesi sici imithetho eqinile. Nezincekukazi ukuqapha ngokucophelela ukuhlanzeka Suites isivakashi. inkonzo Maid inikezwa nsuku zonke (ngaphandle ngamaSonto) futhi ushintsho amashidi kanye amathawula kabili ngesonto.
resort Ingqalasizinda izindawo
Amahhotela Modern ozama ukuqinisekisa ingqalasizinda athuthukile kakhulu izivakashi yayo konke okudingeka bangathola ngaphandle kokushiya indawo. Budebuduze ngemuva mikhuba neMpambano Ihhotela 3 *. Lapha, izivakashi ungasebenzisa uhlu elandelayo amaphrojekthi engqalasizinda:
ehlobo kukhona ongaphandle indawo yokubhukuda;
insimu yonke ehhotela lizungezwe ensimini ukanye utshani eluhlaza, izihlahla zesundu ezishisayo kanye nezinye izitshalo exotic;
kulabo abasebenza ukuchitha isikhathi ukufunda incwadi ezithakazelisayo has a umtapo nokukhetha izincwadi eziningi (kuhlanganise ngesiRashiya);
uma ukhathele emini, bese ukususa uhlobo ngokomzimba unga sibonga obishini;
kungenzeka ukudlala amabhiliyade;
umsoco ihlangabezana izivakashi yokudlela;
ibha uzoba njalo ukufinyelela Ukukhetha eziningi iziphuzo, ukudla okulula kanye nezinye Ungadla;
ezindaweni zomphakathi, i-Internet engenantambo, ukufinyelela okuyinto mahhala;
ensimini ka endaweni yokupaka, ukusetshenziswa okuyinto emananini;
isitoreji umthwalo kuzokuvumela ukushiya izikhwama zakho ngaphambi ukubhalisa noma ngemva kokuxoshwa;
uma ufuna ukubona wonke izinto resort isiqondiso, uthintane edeskini uhambo;
on-site Igumbi ilondolo, okuyinto waziphatha elondolo akuyona kuphela amashidi kanye amathawula, kodwa futhi izimpahla zabo izivakashi;
round yokwamukela iwashi;
guestroom ngamunye inikeza ikheshi;
endaweni okufikela kuyo izingcingo, ungakwazi ukuqasha ibhokisi ephephile (ukusetshenziswa masonto onke kuyokulahlekisela 10 euro);
edeskithophu nakunethiwekhi ikhebula, ungasebenzisa ekhoneni internet etholakala endaweni yokwamukela izivakashi;
ogwini ungakwazi baqashe imishini ukuze amanzi ezemidlalo;
emhlabeni swimming pool unemisebenzi sun bed nezambulela ukuvikela elangeni elishisa bhe ka esiGrekini;
ifakwe ithala esikhulu Sun;
Terminals ukhokhele nezinsizakalo usebenzisa amakhadi asebhange;
esitezi sokuqala we Ihhotela likuvumela exchange;
uzokwazi ukuvakashela esitolo ngaphandle kokushiya indawo ehhotela (nazo ithengiswe khona izidingo zansuku zonke).
Amasevisi ehhotela izivakashi Orion Hotel 3 *
Umphefumulo iyiphi resort Izisebenzi salo, esiwulwazi iklanyelwe ukunikeza izivakashi ngesevisi esiphakeme futhi ukunakekelwa enenhlonipho. Uma sikhuluma Orion Hotel (Rhodes), kuyafaneleka ukuthi izivakashi niyithole ohlwini olulandelayo amasevisi:
ukulethwa kokudla, kanye iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza ezibuthakathaka ezivela yokudlela ngqo efulethini yakho;
Ukubhuka kanye ithikithi yokuthengisa for izindiza noma amanzi indlela yokuthutha;
uma udinga pussycat izinto wayebe esishwabene e amapotimende edilini lomshado ungakwazi aboleke leso yensimbi, ngemva kokushiya idiphozi encane;
Uma unesithakazelo emanzini ezemidlalo, ungathola iseluleko ofundisa ngokuyikho;
edilini lomshado ungasebenzisa ifekisi ikhophi noma scan amadokhumenti wakho;
Ekuseni, ihhotela izivakashi bajabulela ukudla kwasekuseni okunomsoco bese okumnandi lezitsha format;
uma kunesidingo, egumbini, iziponji izesekeli etholakalayo kanye nezinye;
uma ungazizwa kahle, ungathola babonisana udokotela nosizo lokuqala;
kulelo cala, uma udinga imininingwane eyisisekelo ngezincwadi edolobheni, izindawo ingqalasizinda yayo kanye izivakashi wena, xhumana ubhoko edeskini reception;
eliqinisekisiwe ogwini ungasebenzisa izihlalo emphemeni futhi ilanga kombhede.
Kuwo wonke ehhotela inezidingo imithetho yayo ngaphakathi, iyathinteka kanye "Orion". Rhodes inama inqwaba resort amahhotela, futhi kulezi Izinqubomgomo ingase ihluke kancane. Ngokuphathelene isikhungo, izivakashi kuyoba usizo ukwazi lokhu okulandelayo:
ukubhaliswa kanye zokuhlala izivakashi abasanda kufika iqala ncamashi emva ihora lesibili ntambama, kodwa ngokukhokha imali ebekiwe ohlwini intengo, uzokwazi ukusizakala ukufika ekuseni (lokhu kungenzeka kuphela ekutholakaleni);
ngosuku ukuhamba nawe kudingeka nginikeze izihluthulelo kuwo amakamelo ngaphambi emini (kodwa uma ungafuni ukulinda indiza kamuva esikhumulweni sezindiza, thatha ithuba ngasekupheleni phuma, okusho imali njalo ngehora);
izingane ezingaphansi kweminyaka emibili ukuhlala mahhala, futhi uhlaka kungenziwa enikeziwe kubo, uma kunesidingo;
imithetho Ihhotela awavunyelwe ukubeka ezingaphezu kweyodwa Embhedeni owenezelwe;
kule ehhotela resort ayikwazi ihlanganise ezifuywayo, kodwa ngenxa ukwephulwa lokhu kubusa ekuphathweni unelungelo lokuba enqabe isivakashi ukulethwa;
uma uhlela ukufika ehhotela ngaphandle ukubhuka ikamelo kusengaphambili ukuxwayisa ngaphambi kokufika kwabo;
ngesikhathi sokubhaliswa kanye hlola ngamunye isivakashi abasanda kufika ubophekile ukuba ukhokhe inani elimisiwe eseduze kumelwe abuyiswe ku ukuhamba, uma ungeke kubangele umonakalo impahla ehhotela (lemali ebekiwe kungenziwa ukhokhelwe ngokheshi noma nge-credit card);
Guest kungaba ixazululwe ehhotela kuphela uma ikhadi ID evumelekile ngesithombe;
Uma ingane eneminyaka engaphansi kwengu-7 ubudala akudingekile ukuba unikeze ingalali isikhala eyengeziwe ke yokuhlala bakhe ekamelweni mahhala.
Ukuhlolwa amasevisi resort sika
Inketho kuhle namaholidi asehlobo angabhekwa resort I-Orion Hotel Rhodes Wena 3 *. Rhodes evakashela izivakashi eziningi, futhi ungenza umbono othile ku izinkonzo ehhotela ngesisekelo ukuhlolwa kwabo. Ngakho, uma sikhuluma isikhungo, izivakashi wasibeka nezilinganiso elandelayo (5):
Ingqalasizinda ehhotela lifanelwe 4.3 amaphuzu kokuhlaziywa. Ngokuvamile, izivakashi weneliseka konke, kodwa ezinye izinto ezincane (isib, yokupaka esingesihle) ezingonakalisa umbono.
Ukuze izinga lenkonzo ihhotela lifanelwe 3.7 amaphuzu. Abasebenzi kukhona esinenhlonipho kakhulu futhi unake, kodwa wokugcina umthelela ukuhlolwa yokuswelakala pheze ephelele izithombe.
Amagumbi endaweni yokulala kwaba okuqinile ezine. Ukuhlolwa encishisiwe ngenxa esibi kanye nokuntuleka soundproofing.
Ngokuphathelene amathuba nokungcebeleka izingane, nokuhlolwa ngabo azifinyelelanga ngisho phambi Trika. Cishe azikho izindawo zokuzijabulisa izingane, futhi imenyu ekhethekile nalo enikeziwe.
Ukuze indawo izivakashi ehhotela sibekezelele umbono 4.6. Eduze ebhishi, ukuyothenga, ezokuthutha kanye zonke kunesidingo.
Sekuyisikhathi eside Abavakashi ezivela emhlabeni wonke kwadingeka isikhathi ukubamba resort fancy Orion Hotel Rhodes 3 *. Izibuyekezo lezivakashi ukuvumela isithombe mazombe omuhle wokuphumula. Kuwufanele unaka lezi zinkulumo ezilandelayo:
Met edilini lomshado ishiya isithombe esihle kakhulu;
Abasebenzi umsebenzi omuhle, kodwa cishe imperceptible;
amanani e zokudla akuzona eliphezulu kakhulu futhi musa ihluke izindleko zokudla kwezinye izindawo ezifanayo resort;
It elise Awukude kolwandle, imizuzu 5 nje ngezinyawo - futhi uwena ogwini;
indawo elula maqondana nengqalasizinda zasemadolobheni kanye izivakashi;
ezincikene amakamelo balcony ivulekile kakhulu, ngakho lapha ibekwe ngokukhululekile ifenisha engadini, izingubo, futhi namanje endaweni;
umhlobiso omuhle egumbini (isimo kakhulu efana ekhaya);
amathawula lishintshwa nsuku zonke;
elikhulu ukubhukuda ahlanzekile echibini;
I amakamelo TV entsha;
serviceable futhi ehlanzekile ware sanitary;
endaweni eziningi zasemazweni kanye imihlobiso - kuyacaca ukuthi wakhe uzilungise ngokucophelela;
abasebenzi balapha banobungane futhi anake;
sijabule ngokuthi egumbini unesiqandisi;
Izoni yokwamukela izivakashi isiqedile ngokuphelele ukhuni zemvelo, esihlinzeka eyigeza futhi iphunga elimnandi;
ihhotela wenza ukulungisa kunalokho fresh (nakuba zinesizotha);
endaweni yokwamukela izivakashi kukhona iwindi ububanzi Sills nge omatilasi bahlale;
cocktail okumnandi zikhishwa ibha, osebenzela eduze echibini;
Uma izivakashi ungathandi egumbini labo, khona-ke ukushintsha ngaphandle kwendibilishi.
Ngeshwa, kukhona ezithile ezingathandeki abalulekile kanye nokushiyeka emsebenzini izakhiwo spa, njengoba i-Orion Hotel Rhodes. Izibuyekezo aqukethe eziningi imibono engakhi, ebaluleke kunayoyonke zazo yilezi ezilandelayo:
imibhede kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu - emva esilele omatilasi kanzima futhi imicamelo flat esabekayo ubuhlungu emuva;
Ngezinye izikhathi kwenkinga ne conditioning air - efudumele esikhundleni emoyeni abandayo;
(Amaqanda ngiyocasha, omelettes, nokunye okunjalo) ibhulakufesi nesizotha kakhulu futhi okuyisidina;
yokudlela kufeza izithelo ezingavamile kakhulu, okuyinto kakhulu ngajwayelekile for Greece, lapho bekhula ngamanani amakhulu (cishe kunazo, iningi athunyelwa kwamanye amazwe);
ikhishi ekhoneni egunjini, eqinisweni, engenamsebenzi, ngoba ayinikeli ukulungiswa ukudla okushisayo;
nelineni ihlanganiswa ngokuphelele izimbobo ezincane (nakuba kuwufanele ngincome ebumsulweni nasebunyeni);
air conditioning emsebenzini yokudlela kahle kakhulu, kodwa ngenxa yokuba khona kubuhlungu kakhulu;
Iningi amakamelo akusho ukubamba Inthanethi engenantambo;
air conditioning kumagumbi umsindo nelesabekayo;
yokudlela ukhonza ukudla abandayo (umuzwa wokuthi lokho akusho ngisho zama ukuxoxa);
yokuhlanza lamakamelo kushiya okuningi okufanele oyifunayo (kakhulu ukuthi kungalindeleka ukuthi nezincekukazi sizosuleleka uthuli);
ukuya ebhishi udinga kokuwela umgwaqo (ububi main ukuthi imishini akuzona ezisheshayo akhale abahamba ngezinyawo);
ngakho okungenani okudliwayo ibhulakufesi, udinga ukuza ekamelweni lokudlela ekuseni;
amathawula ogwini ehhotela ungalilahli out, ngakho hamba nayo uma ungafuni ukuchitha imali kubo endaweni yokulala;
echibini ibha cishe ekuseni ubedlalela umculo phezulu, kodwa ngenxa yokuthi izivakashi, ogama amafasitela zitholakala lapha, akunakwenzeka ukuba bakwazi uphumule;
enethiwekhi futhi ukushintsha okudinga ukulungiswa noma ukushintshwa kuphelele;
amakamelo Abaningi okhiye ephukile nje rewound itheyiphu;
noma ngabe i-ibibhukelwe ikamelo, ekufikeni kungenzeka ukuthi akukho izihlalo singenamuntu;
zommbila Waze wangcola (kodwa uma acabangele ukuthi ezimweni izibuya engemingaki, bangasifaka neze ukuyisebenzisa);
egumbini lokugezela wathola eziningi izintuthwane encane (ikakhulukazi inkinga acute emakamelweni esitezi sokuqala);
akucaci ukuthi kungani izintombi zasemizini wafutha emva yokuhlanza igumbi emoyeni freshener, kodwa ngoba igumbi uye ku ingashaywa isikhathi eside;
naphezu kweqiniso lokuthi emphemeni inikeza ifenisha ongaphandle, izingubo nezikhonkwane azitholakali;
kakhulu some inqubo yokubhalisa.
Into yokuqala kufanele sinake - lena indawo elula kuyona Orion Hotel Rhodes 3 *. Faliraki - kuyinto idolobha elincane, kodwa lokho akusho ukuthi abahambi kuyodingeka ngizithola lapha. Kukhona amathilomu eziningi, izindawo zokudla, kuma-nightclub kanye nezinye zemicimbi ukuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, e eduze ngokushesha leli hhotela esitobhini sebhasi, ukuze ukwazi ukuhamba emizini angomakhelwane. Mhlawumbe ethile kuphela dislocation ehhotela angabhekwa ukuthi eya ebhishi udinge ukuya endleleni ingxenye yomgwaqo ebekelwe izimoto nge yokudlula esiminyaminyeni sezimoto. Ngeshwa, Greece kungamukelwa ukuba abahamba ngezinyawo, ngakho kudingeke ukuba ulinde ewindini isikhathi eside phakathi izimoto ezidlulayo.
endaweni ehhotela Orion Hotel Rhodes 3 * siqala elincane, kodwa kukhona isikhala esiningi sokuzilibazisa uhamba. Garden, swimming pool kanye nezinye izindawo wabheka emva ngokucophelela. Njengoba for isakhiwo ngokwaso, kubuye kube ngempela nice, nakuba izakhiwo kanye uyisidala. Ingaphakathi endaweni yokwamukela izivakashi limnandi kakhulu futhi uyabukeka emehlweni. Ngokuqondene izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza, akudingeki ukulungiswa kuphela kodwa futhi imishini, ikakhulukazi umoya isimo, okuyinto ngokuphelele akakwazi ukubhekana nemisebenzi yabo. Esizeni sasivumela ethule, ngaphandle kwesigaba eduze kwechibi. Uma uthanda ethule, pre-ucacise indawo ekamelweni lakho.
Amagumbi ngesikhathi Orion 3 * (Rhodes), nakuba zinesizotha, kodwa ngempela ethokomele. Kukhona ukulungisa ngokwanele fresh, nakuba kukhona ezithile. Ngokuvamile, uya eholidini ehhotela, kuyafaneleka zangaphambi ukuzibizela ukuthi isabelomali, "ezintathu" ngeke uthole okunethezeka aphambili. ngakho azibafici iyiphi ukuphoxeka. Nansi konke okudingeka ukuphumula libuyise amandla phakathi nemikhankaso olwandle aye Uhambo ethokozisayo.
Thunga ingubo ngokwabo ehlobo: ngubo ukuba inkosazana
Ukupheka for nachinayuschihozyaek: Recipe indoutki